NGUWUPHI UMBALA WEEMFAMA EKUFUNEKA NDIZIKHETHILE? - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Nguwuphi umbala weemfama ekufuneka ndizikhethile?
Xa kuziwa kukhetho olungaboniyo umbuzo othandwayo ngowuphi umbala weemfama endifanele ndizikhethe? Apha sabelana ngesikhokelo sethu sokuyila iimfama kuyilo lwakho lwangaphakathi. Njengefanitshala kunye nokuhonjiswa, iimfama zefestile zizinto ezisebenzayo ezongeza ingxelo yokuhombisa ngaphakathi kwakho.
Iimfama zefestile zisiphumelela ngokulawula inqanaba lokukhanya kunye nokungenisa umoya ngelixa sinikezela ngemfihlo yethu esiyifunayo. Iimfama aziqokeleli uthuli xa kuthelekiswa ne-draperies kunye namakhethini enza ukuba kube lula ukucoceka kunye nonyango lwefestile olusempilweni.
Umbala kunye iintlobo zeemfama ukhetha ukudlala indawo enkulu kuyilo lwangaphakathi lwegumbi lakho.
Yeyiphi imibala engaboniyo ekufuneka ndiyikhethile?
Kwicala elikhuselekileyo- ukungathathi cala
UkuKhanya okanye uMnyama
Imibala eshushu kunye nemibala epholileyo
Zithini iiMfama eziMfiliba zeWall White?
Gqamisa ukuJongwa kwangaphandle-Imibala yeenkuni
Yenza i-Décor yeWindow enokubonakalayo
Okuncinci kuninzi - Mhlophe kuMhlophe
Yeyiphi imibala engaboniyo yeendonga eziNgwevu?
Ngaba iimfama kufuneka zikhanyise okanye ziMnyama kuneeNdonga?
Monochromatic (Analogous) -Ukuba ube nesiphumo sokuThoba
IyaNcedisana -Yithuba eliKhuthazayo
Nguwuphi owona mbala ubalaseleyo weemfama?
Ngaba iimfama zam kufuneka zihambelane nomgangatho wam?
Ngaba zonke iimfama kumdlalo wendlu?
Ngemibala emininzi, izitayile, kunye neempawu onokukhetha kuzo kuyilo olungenamda kodwa oku kubandakanya nokukhetha ngononophelo ngakumbi xa kusenziwa ukukhetha kumbala ofanelekileyo.
Njengomgaqo wesithupha, ukungathathi hlangothi okufana nomhlophe, ukhilimu, okanye i-beige zii-hues ezihlala zihamba kunye nemibala eyahlukeneyo kwigumbi.
izimvo zeminyaka engama-50 zomtshato
Njengoko ingangqubani nemibala yakho esele ikho, zikwalungile xa unokucinga ukutshintsha umbala wakho waseludongeni okanye ukuhombisa kwigumbi lakho kwixesha elizayo.
Umbala uyasebenza ekuphembeleleni iimvakalelo kwindawo, kunye nokukwazi kwayo ukwenza indawo ethile kwigumbi. Xa unegumbi elibekwe ngokuqinileyo, iifestile ezinemibala ekhanyayo ezimhlophe okanye imibala emhlophe ivula indawo.
Imibala emnyama okwangoku yenza umoya opholileyo kwaye ilungile kwiindawo zokulala kunye nezinye iindawo ezifuna umoya opholileyo kunye nokuzola.
Imibala eshushu enjengombala omdaka notyheli yenza amandla amaninzi kunye nemvakalelo yekhaya, iyenza ukhetho olufanelekileyo ekhitshini, kwigumbi lokuhlambela, kwigumbi leendaba, okanye nakweyiphi na indawo ofuna ukuba nayo.
Imibala epholileyo, okwangoku, ibandakanya ukuziva uzolile njengekalika, isibhakabhaka esiluhlaza, i-lavender, okanye nayiphi na ithoni yombala ecaleni kwebala eliluhlaza kunye nohlaza. Le mibala mihle kumagumbi okulala, kumagumbi okuhlala, okanye kumagumbi okuhlambela.
Umhlophe ngumbala wendalo yonke othambekele ekudibaneni nayo yonke eminye imibala, kodwa kukhetho oluninzi kunokuba ngumsebenzi omkhulu ukukhetha eyona ilungele iindonga zakho ezimhlophe.
Xa ii-slats ezithe tye zivuliwe ngokupheleleyo, uya kufumana umbono olungileyo wangaphandle. Ngeendonga ezimhlophe, amehlo atsalelekile kwiimfama zakho ezinemibala.
Isakhelo esimnyama sefestile esineendonga ezimhlophe sikhulu ngomthi okanye ngamehlo amdaka ngombala ngakumbi xa unembonakalo yendalo ukuze siyibone njengoko inika umgangatho wolwimi ekujongeni.
Amakhitshi ngokwemvelo agcwele ubomi apho abantu bahlangana kwaye bonwabele yonke into malunga nokutya kunye neencoko. Ngee-hues eziqaqambileyo nezinomdla ezifana ne-lime, i-avocado, okanye ii-apricot hues uya kongeza ukonwaba entliziyweni yekhaya.
Ubuhle bokuba neendonga ezimhlophe kukuba ungasebenzisa imibala eyomeleleyo ngaphandle kokwenza imeko eyoyikisayo.
Ukuba ubuncinci isitayile sakho, ke iimfestile ezimhlophe zeefestile ezimhlophe ngeefreyimu ezimhlophe kunye nodonga olumhlophe yindibaniselwano efanelekileyo yokuya kuyo xa uthanda ukubukeka okucocekileyo nokungangxami.
Okanye, ukuba ufuna ukugxila ngakumbi kwifenitshala okanye ukuhonjiswa, indawo emhlophe emsulwa yindawo yakho egqibeleleyo.
Iindonga ezingwevu zinokujongeka zinobunkunkqele kwaye zingaphelelwa lixesha kwaye xa zifaniswa nombala othile zinokudala imeko ezimangalisayo. Ukuba unalo mbala wodonga kuya kufuneka uziphathe ngokwakho ekubeni nesibindi ekuthatheni imibala eyahlukeneyo kodwa enzima.
Musa ukukhutshwa nangona unako ukuthatha ithuba lomthunzi ukudala izithuba ezizodwa kunye nombala ofanelekileyo weemfama zakho.
ndithengela ntoni umfazi wam ngosuku lokuzalwa kwakhe
Umahluko oqaqambileyo -Ngokuba grey ngokwendalo buya ngasemva, unethuba lokongeza imibala eqaqambileyo kwaye ehlekisayo. Ukudibanisa iimfama kunye namakhethini kunokudala uyilo oluhle lwewindow. Oku kusebenza ngakumbi kulawulo lokukhanya kunye nombala. Funda ngakumbi malunga amakhethini vs iimfama Apha.
I-Midrange ukuya kwiGrey emnyama -Imibala etyheli eneeorenji okanye orenji zangaphantsi zethoni ezifudumeleyo kunye nelamuni emthubi ukuze ufumane umphumo opholileyo.
UkuKhanya kuMdaka ophakathi -Amafama e-orenji anokongeza ubomi kwezi toni zithulisiweyo.
Iimpawu zeGrey - Ngelixa umhlophe kumhlophe usebenza kakuhle, imibala eyahlukileyo engwevu kwiwindows yakho iyimfamekisa phantsi kumgangatho wakho wokwenza umphumo onomdla we-monochromatic. Njengomthetho wesithupha nangona usebenzisa umbala omnyama okanye okhanyayo kuludonga lwakho olukhoyo olungwevu.
Scandi- Ukhuthazekile -I-Beige, i-tan, kunye nawuphi na umbala ohambelana nale mibala ehambelana nodonga olukhanyayo ongwevu unokukhangeleka ukhululekile kwaye uncwine ngaphakathi kwaye usebenza kakuhle kwigumbi lokuhlala okanye kwamanye amagumbi okuphumla.
Mnyama okanye Mhlophe -Amnyama amnyama avelisa ukubonakala kwesiqhelo kunye nokungaqhelekanga kwaye aza kusebenza ngokugqibeleleyo ngeefreyimu ezimhlophe zeefestile ngenxa yamanqanaba okwahluka athathayo eludongeni nakwifestile.
Mhlophe, kwelinye icala, ngumbala okhuselekileyo onokukhetha kuwo kwaye ujongeka ulungile nakweyiphi na indlela oyithandayo.
Impendulo emfutshane nguewe xa ujonge ukubonakala kwemonochromatic kwaye ayisiyiyo xa ujonge imibala ehambelana nayo. Nangona kunjalo, kwicala elikhuselekileyo, jolise ukukhanya okanye umbala omnyama kwiimfama zakho ezichasene neendonga zakho.
Umahluko licandelo elisisiseko ukongeza umdla obonakalayo kwisithuba esithile, kwaye ukusukela windows ukuvumela ukukhanya kunye nokujonga kwisithuba, yinto ekunzima ukuyiphosa.
Iimfama zakho kufuneka zibe ubuncinci emthunzini mnyama okanye zikhanyise kuneendonga zakho ukwenza umahluko, kwaye oko kufanele ukuba kube nethoni efanayo okanye usapho olunombala.
Ezi zii-hues ezihleli malunga nevili lombala, umzekelo, tyheli ngokuchasene neblue okanye ngwevu ngokuchasene nobomvu.
Ukukhetha owona mbala ungcono weemfama kuxhomekeke kakhulu kwizinto ezinje ngombala wegumbi, ifreyimu yombala, umbono, ifenitshala, kunye nesitayile ojolise kuso.
iifoto zothando olufutshane kwintombi yakho
Ukungathathi hlangothi- okwangoku kunye neHygge. Owona mbala uthandwayo weemfama awuthathi hlangothi kunye nemibala ekhanyayo enje nge-beige, emhlophe okanye ngwevu eya kwiindlela zangoku okanye zeScandinavia.
Sikwabona oku kudityaniswa kwezitayile zangoku zefama kunye nezinye iindlela zokuvuselela.
Ukuhambelana -Chic yeDolophu. Ngokwesiqhelo, uyakufumana ezi ndibaniselwano zinomdla kumagumbi amancinci apho abanini khaya abancinci aboyikiyo umbala kwigumbi.
Umzekelo, iimfama zombala otyheli zihambelana nodonga olunombala weti kunye nezinto ezimhlophe zefestile. Okanye, umbala wefuscia uyimfama ehambelana nodonga olungwevu kunye neefestile ezimhlophe zefestile.
Iimfama akufuneki zifanise imigangatho yakho, kodwa kukhuselekile ukuhamba kunye neemfama ngesandi esiphantsi kumbala wakho womgangatho.
Njengoko imigangatho imnyama kumnyama emhlabeni okanye kumisa yonke inkangeleko, khetha iithowuni ezikhanyayo xa kufikwa kwiimfama zakho.
Kwimbonakalo yangaphandle yendlu yakho, ukuba nemfama emanyeneyo ehambelana kuyabonakala ngcono kunokuba unemibala eyahlukileyo kwiifestile zakho, ngakumbi xa ujonge kwelinye icala lekhaya lakho.
izipho zomtshato zetheko lomtshato
Nangona kunjalo, usenokukhetha imibala eyahlukeneyo enosapho olufanayo lombala.
Ukukhetha iingcinga zokugqibela ezingaboniyo Ukufumana owona mbala ubalaseleyo weemfama zakho kunokuba lishishini elikhohlisayo njengoko kufuneka uqwalasele ukuba lihamba njani nezinye izinto zegumbi.
Ukuba awuqinisekanga ukuba ngowuphi umbala oza kuhamba kuwo okanye ufuna ukonwabela iimfama zakho ixesha elide, khetha imibala engathathi hlangothi kwiifestile zakho.
Kukwabalulekile ukuba uqaphele ukuba umsebenzi wegumbi lakho ikwangumbandela xa ukhetha imibala. Iikhitshi, umzekelo, zilungile kwii-hues eziphilileyo ezinje nge-lime eluhlaza okanye iimfama ezityheli, ngelixa iindawo zeofisi, ngenxa yendalo yazo iya kuhamba kakuhle ngemibala emnyama, emhlophe, okanye ngwevu.
Kwakhona, sukungazinanzi izakhelo zefestile, njengoko umbala unokuchaphazela ngokubonakalayo ukubonwa kweefestile zakho zonyango.
Ngakumbi malunga nesi sihloko ndwendwela inqaku lethu lokuthelekisa ii-shutter vs iimfama .
simahla sindisa umhla we-ecards
Umama womtshato unyana wengoma yomdaniso
uza kufumana ntoni umfazi ngosuku lokuzalwa
quartz emnyama nomhlophe
imifanekiso yophahla lwenqanawa